၁၀ ဂိုးသွင်းတဲ့ အင်္ဂလန် ၊ ခြေချော်သွားတဲ့ အီတလီ ၊ လှုပ်ခတ်လာတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အသံတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစားသတင်းများ - xyznews.co
၁၀ ဂိုးသွင်းတဲ့ အင်္ဂလန် ၊ ခြေချော်သွားတဲ့ အီတလီ ၊ လှုပ်ခတ်လာတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အသံတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစားသတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲရဲ့ ဥရောပ ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ဆမ်မာရီနို အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၁၀ ဂိုးပြတ် သွင်းယူကာ အနိုင် ကစားပြီး တိုက်ရိုက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အတွက် တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း က တယောက်တည်း ၄ ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး မက်ဂွဲယား ၊ စမစ်ရို ၊ တိုင်ရွန်မင်းစ် ၊ အေဘရာဟမ် နဲ့ ဆာကာ တို့က ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူ ခဲ့ကြကာ O.G တဂိုး လည်း ထပ်ရခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ ကတော့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်မှာ မြောက်အိုင်ယာလန် ကို ဂိုးမရှိ သရေ ကစား ခဲ့တာကြောင့် ဘူလ်ဂေးရီးယား ကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့တဲ့ ဆွစ်ဇာလန် ဟာ အုပ်စု ပထမ နေရာကို ရယူပြီး တိုက်ရိုက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူရို ၂၀၂၀ ချန်ပီယံ အီတလီ ကတော့ Play-off ထပ်မံ ကစား ရဦးမှာပါ ။
အာဆင်နယ် ဟာ ဗီလာရီးရဲ လူငယ် ကစားသမားလေး ယီရီမီ ပီနို ကို စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပီနို ဟာ ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ၂၀၂၇ အထိ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို ထားပြီး ယူရို သန်း ၈၀ တန် စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ပါရှိသူ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
တပတ် နားရက် ပေးထားအပြီး မှာတော့ လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ မပါတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေဟာ မနေ့က လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်ဆင်းဖို့ ကာရင်တန် ကို ပြန်ရောက်လာ ခဲ့ကြပါတယ် ။
နည်းပြ ဆိုးရှား ကတော့ ပြန်ရောက် မလာသေးဘဲ ကစားသမားတွေရဲ့ မျက်နှာ အမူအရာတွေ ကလည်း တက်ကြွမှု ရှိမနေ ကြဘူးလို့ သတင်း ဓါတ်ပုံတွေက ဖော်ပြ နေခဲ့ပါတယ် ။
ဗီလာ နည်းပြသစ် စတီဗင် ဂျရတ် ကတော့ မနေ့က အသင်းသစ် ကို စတင် ကိုင်တွယ် ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ နွေရာသီ မှာ ကွင်းလယ်ကို ထပ်မံ အားဖြည့် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အေစီမီလန် ရဲ့ အိုင်ဗရီကိုစ့် ကွင်းလယ်လူ ဖရန့် ကတ်ဆီ ကို စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ရီးရဲ ဟာ ဗီလာရီးရဲ နောက်ခံလူ ပေါလ် တောရက်စ် ကို တော့ စိတ်ဝင်စားမှု အဆုံးသတ် လိုက်ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမှာ နေရာပျောက်နေတဲ့ ဆားဘီးယား တိုက်စစ်မှူး လူကာ ဂျိုဗစ် ကတော့ ဇန်နဝါရီမှာ အငှား နဲ့ ထွက်ခွာ လိုတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ ကူလူဆက်ဗ်စကီး ကို နီကိုလပ်စ် ပေပေ နဲ့ အလဲအထပ် ပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ကူး နေပေမယ့် အီတလီ ကလပ် ဘက်က ငြင်းဆိုသွားဖွယ် ရှိနေပြီး ငွေသား နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကိုသာ စိတ်ဝင်စား လိမ့်မယ်လို့ အီတလီ အခြေစိုက် အားကစား သတင်းစာတွေက ရေးသား ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ကီဗင် ကင့်ဘဲ ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာ နေရာ ပျောက်ဆုံး နေတဲ့ နယ်သာလန် ကွင်းလယ်လူ ဒွန်နီ ဗန်ဒီဘိ ကို ခေါ်ယူဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဇာဗီ နည်းပြ ဖြစ်လာ အပြီး မှာတော့ PSG ကို ပြောင်းရွှေ့ ထွက်ခွာ သွားခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ အကယ်ဒမီ လူငယ် ကြယ်ပွင့်လေး ဇာဗီ ဆိုင်မွန် ဟာ နူးကမ့်ကို ပြန်လာဖို့ စိတ်ဝင်စား လာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဇာဗီ ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းဟောင်း အယ်လ်ဆတ် က အယ်လ်ဂျီးရီးယား တိုက်စစ်မှူး Baghdad Bounedjah ကို ခေါ်ယူ ပေးဖို့ ဘာစီလိုနာ ဘုတ်အဖွဲ့ ကို တောင်းဆို ထားတယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရိန်းဂျားစ့် ၊ စပါး နဲ့ အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဂျာမိန်းဒီဖိုး ဟာ စတီဗင် ဂျာရတ် ထွက်ခွာ သွားပြီး လစ်လပ် နေတဲ့ ရိန်းဂျားစ် နည်းပြ ရာထူး အတွက် လူ ၄ ဦး ပါဝင်တဲ့ ယာယီ နည်းပြ အဖွဲ့ မှာ ပါဝင် လာခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရိန်းဂျားစ် ဟာ နည်းပြသစ် ခန့်အပ်ရေး ကို အရှိန်အဟုန် နဲ့ လုပ်ဆောင် နေပြီး နယ်သာလန် လူမျိုး နည်းပြ ဗန်ဘရွန်ခရော့စ် က သတင်းအကြီးဆုံး ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ယာယီနည်းပြဟောင်း ဖရက်ဒီ ယွန်းဘတ် ဟာ ဂျပန် ကလပ် FC Tokyo ကို နည်းပြ အဖြစ် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ဖို့ ရှိနေပြီး ဂျပန် ကလပ် ဘက်ကလည်း ယွန်းဘတ် ကို ထိပ်ဆုံးက ဦးစားပေး စဉ်းစား နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး လူငယ် ကစားသမားလေး ဟာဗေး အီးလီးယော့ ကတော့ ကွင်းထဲ ကို ပြန်ဆင်းကာ တကိုယ်တော် လေ့ကျင့်မှုတွေ စတင် ပြုလုပ် လာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ သတင်းကောင်း ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article ယူနိုက်တက်တို့ အမြန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့ အူစိန်ဘော့
Next Article နိုင်ငံအသင်းပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေသွင်းပြီး တောက်ပခဲ့ကြတဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမား ၁၀ ဦး